Qabaa'ilan Li'tacaarafuu • Oodweynenews.com Oodweyne News
Beel weynta Aadan-madoobe, sidii dagaalkii sokeeye ee qarnigii 19aad uu u kala qaxiyey, dib iskuma aanay haybsanin, oo dib isku ma aanay raadsanin. Badankeedu’nais ma ba tirsadaan, oo beelo kale aya’ay ku kala dhex milanyihiin.
Inteeda istaqaanaa’ina, taariikhdoodii saxda ahayd ku ma socdaan, oo ku ma dhaqmaan, oo aad iyo aad, aya’ay u baalmarsanyihiin. Sababtu’na,muddo horeaya’ay dhacdey, oo dacaayado raqiis ahaa, aya’ay ka bilaabantey. Taasaa’na nasiib darradan keentey, oo beeshii kala furfurtey, oo midnimadeedii’na dhaawacdey.
Runtu’se waxa ay tahay, beesha Aadan-madoobewaa wada Ugaadh Aadan-madoobe. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah, aya’ay dagaalkii sokeeye gashey. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah, aya’ay kala qaxdey. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah’na, wa’ay kala maqantahay.
Hadda’ba beesha waxa la gudboon, in aanay waxii horey u soo daashadey, ee kala qeybqeybiyey, ee kala qobqobey, ee kala fogeeyey, in aanay dib u sii eeganin; oo intaas in ka badan’naaanay huursanin.